ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ် ၊ နော်ဝေ နှင့် တူနီးရှား အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်တို့က ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ပဋိပက္ခအခြေအနေ နှင့် ပတ်သက်၍ အတူတကွ ဆွေးနွေးမှုကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ - Xinhua News Agency
ကုလသမဂ္ဂ ၊ မေ ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတွင် မေလ ၁၆ ရက်၌ ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ကျန်းကျွင်း က ကုလသမဂ္ဂ ဆိုင်ရာ နော်ဝေ နှင့် တူနီးရှား နိုင်ငံ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တို့နှင့်အတူ သတင်းမီဒီယာများအား တွေ့ဆုံးခဲ့ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ပဋိပက္ခ အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ အတူတကွ ဆွေးနွေးမှုကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။တရုတ် ၊ နော်ဝေ နှင့် တူနီးရှား နိုင်ငံတို့မှကိုယ်စားလှယ်တို့က ဂါဇာဒေသအခြေအနေ နှင့် အရပ်သားပြည်သူများ သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လွန်စွာစိုးရိမ်ပူပန်မိကြကြောင်း ၊ ရန်ပြုသည့်ဆောင်ရွက်မှုများကို ချက်ခြင်းရပ်တန့်ကြပြီး နိုင်ငံတကာလူသားချင်စာနာထောက်ထားမှု ဥပဒေအပါအဝင် နိုင်ငံတကာဥပဒေတို့ကို အပြည့်အဝလိုက်နာကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ၊ အရပ်သားပြည်သူလူထု နှင့် အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အကြမ်းဖက်မှုများ ၊ ရန်စမှုများ ၊ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုများ ၊ ဖျက်ဆီးမှုများ နှင့် နှင်ထုတ်မှုအစီအစဉ်များကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုကြောင်း ၊ ဂျေရုဆလင်အရှေ့ပိုင်းဒေသ တင်းမာမှုအခြေအနေ နှင့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှုဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ဂရုပြုမိပြီး အထူးသဖြင့် Al-Aqsa ဘာသာရေးအဆောက်အဦ နှင့် ဘာသာရေးအထွဋ်အမြတ်နေရာများအနီးတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများလည်းပါဝင်ကြောင်း ၊ သက်ဆိုင်ရာများအနေဖြင့် အတိုင်းအတာအကြီးမားဆုံး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ကြရန် နှင့် ဘာသာရေး အထွဋ်အမြတ်နေရာ၏ သမိုင်းကြောင်းအခြေအနေအပေါ် လေးစားမှုထားရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ သက်ဆိုင်သူအားလုံး တင်းမာမှုအခြေအနေကို အမြန်ဆုံး အတူတကွ လျော့ကျအောင်ဆောင်ရွက်ပြီး အကြမ်းဖက်မှုများကို ရပ်တန့်ကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ၊ သုံးနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက် နှင့် နိုင်ငံတကာဥပဒေတို့ကို အခြေခံ၍ ဆွေးနွေးမှုမှတစ်ဆင့် ရရှိခဲ့သည့် နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်း (Two-state solution )အား ထောက်ခံအားပေးပြီး ယင်းအပေါ် နိုင်ငံခြားရေးဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုလျှင်မြန်အောင်တိုးချဲဆောင်ရွက်သွားကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ကျန်းကျွင်း က တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင် ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိ မှ လုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေး အား ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး ပဋိပက္ခ နှင့်ပတ်သက်၍ သဘောထားရပ်တည်မှုကို ဘက်စုံရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ၊ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် လက်ရှိအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်ရမည်မှာ တိုက်ခိုက်မှုများရပ်စဲသွားအောင် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ပါလက်စတိုင်းအရေး ရေရှည်မှန်ကန်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကိုလည်း တွန်အားပေးဆောင်ရွက်ရန် အရေးပါကြောင်း ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီအနေဖြင့် ယင်းကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးလေးသော တာဝန်ကို ခံယူထားပြီး မဖြစ်မနေဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ကာ တင်းမားမှုအခြေအနေအား ဖြေလျော့နိုင်အောင် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ရန်ပြုသည့်ဆောင်ရွက်မှုများကို ရပ်တန့်ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် မှန်ကန်သည့် လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကာ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ သက်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များ နှင့် နှစ်နိုင်ငံဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ကျန်းကျွင်း က ပါလက်စတိုင်းအရေးအား နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းမှုမရရှိနိုင်ပါက ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး နှစ်ဘက် နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင် စစ်မှန်သည်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်မှာ မလွယ်ကူကြောင်း ၊ လုံခြုံရေးကောင်စီ မေလ၏ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် လုံခြုံရေးကောင်စီက ဆောင်ရွက်သွားရန် ဆက်လက်တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အတူတကွသဘောထားဖြင့် နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အန္တရာယ်ကို အဆုံးသတ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ အနေဖြင့် လုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အားလုံးအား နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်း၏ အတူတကွ ကြိုးပမ်းမှုအပေါ် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ပါလက်စတိုင်း-အစ္စရေး အခြေအနေက လတ်တလောရက်ပိုင်းတွင် အဆက်မပြတ်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးနောက်တွင် တရုတ် ၊ နော်ဝေ နှင့် တူနီးရှား ၃ နိုင်ငံတို့က လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် အနီးကပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် အရေးပေါ် ဆွေးနွေးမှု နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်အောင်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၊ ၃ နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အနေဖြင့်လည်း မေလ ၁၆ ရက်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် လုံခြုံရေးကောင်စီ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးအား အတူတကွတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။ (Xinhua)
2021-05-17 03:43:31 分类： 政治法律
1. 5月16日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表张军（左）同挪威常驻联合国代表莫娜•尤尔（中）、突尼斯常驻联合国代表拉德布共同会见记者。新华社记者 谢锷 摄
2. 5月16日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表张军会见记者. 新华社记者 谢锷 摄